Mahadum Honoris United na-ekwupụta Mmụta Na-agbanwe agbanwe Iji bulie Mmụta Innovation na Africa
Mahadum mahadum Honoris United na-ekwupụta Mgbanwe Mmụta iji bulie Mmụta Ọzụzụ na Africa
DarkSide: Ihe Mgbapụta Ransomware ahụ Na Egwu Egwu Africa Firms
Site na Africa rue World, InstaNovella na-agbasawanye Skè Akwụkwọ Akwụkwọ Africa
Usoro nke teknụzụ: Otu E-Learningmụta si Agbanwee Akụkọ Mmụta- Rebecca Stromeyer
Steeti nke ụlọ ọrụ e-commerce nke Nigeria: Uto na ihe ịma aka [ICT Clinic]
Nyocha: African Tech Ecosystem of the Future
Honoris kpebisiri ike imepụta mmetụta mgbanwe na agụmakwụkwọ n'ofe Afrịka site na ịnọdụ n'ihu usoro mmụta ọhụụ
Dịka akụkụ nke ntinye aka ya na-aga n'ihu iji kụziere ma kwadebe ndị isi na ndị ọkachamara n'ọdịnihu n'Africa nwere nka narị afọ nke iri abụọ na otu, Mahadum Honoris United - ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ mbụ na nke kachasị ukwuu nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka elu - ekwuputala mmekorita ọhụrụ na Area21 Lyceum, ụwa - onye ndu amaara ama na nhazi imu ihe.
Mgbakwunye nke mmụta na-agbanwe agbanwe, nke na-agbanweghachi na mmụta ahaziri iche na uru nke onye nkuzi onwe onye n'otu n'otu, na Honoris curricula gosipụtara nrụgide nke netwọkụ maka mmuta ihe ọmụmụ site n'inye ụmụ akwụkwọ ohere ịnweta teknụzụ mmụta dị elu.
Nke dị iche na usoro agụmakwụkwọ dị iche iche, agụmakwụkwọ na-agbanwe agbanwe na-ewepụ oge ọzụzụ iji lekwasị anya n'ịmepụta mmụta dị elu na ndị na-amụ ihe, na-eme ka nsonaazụ na-ekpughe enweghị isi.
Ahaziri mmụta ka mma nka nnweta
Mmụta na-agbanwe agbanwe na-eji nyocha data egosipụtara na teknụzụ nke ahụ ghọtara nke ọma usoro mmụta nke onye ọ bụla pụrụ iche site na algorithms site na ọtụtụ ijeri mmụta mmụta, na-agbanwezi mkpa nke onye ọ bụla na-amụ ihe.
Ọ na-enye ụlọ ọrụ ohere ịmebe-ịme mmụta dị ka mkpa nke nwa akwụkwọ ọ bụla, na-enyefe ahụmịhe kachasị mma nke na-ewepụta nsonaazụ nke onye mmụta na etiti nke kwekọrọ na agụmakwụkwọ nke ụmụ akwụkwọ Honoris.
Na-agụkwa, Mahadum Honoris United na-ebupụta Asambodo Nkà Mmụta Ọchịchị 21st Century maka ụwa ọrụ n'ọdịnihu
N'iji arụmụka enwetara na Area9 gosipụtara na ngalaba sayensị ahụike, Honoris ewebatala usoro a na usoro nke Ahụike na Tunisia na Azụmaahịa na South Africa.
N'ikwu banyere mmekorita ahụ, Laura Kakon, Chief Growth & Strategy Officer, Honoris United Universities, kọwara otú, “Agụmakwụkwọ ka elu na-agabigharị nhazi dị mkpa, yana isi ihe dị mkpa na sistemụ mmụta ọhụrụ nke na-eme ka ọ dịkwuo nnweta mmụta.
Obi dị anyị ụtọ isoro onye na-ahụ maka usoro mmụta mmụta nke Area9 Lyceum's Rhapsode ™ mepụta usoro mmụta ahaziri iche nke dị oke mkpa iji melite nsonaazụ nke ụmụ akwụkwọ anyị.
Na Honoris, anyị na-agba mbọ ka itinye ego na agụmakwụkwọ ọhụrụ na ịgagharị ọhụrụ ụzọ nke nnyefe na a siri ike na-elekwasị anya na-amụrụ ihe ịga nke ọma. Ọganihu nke narị afọ nke 21 chọrọ nkuzi na mmụta nke narị afọ nke 21. ”
Emeputara na afọ 25 nke nyocha ihe omimi sayensị ma jee ozi ihe karịrị nde 30 na ụwa dum, Mpaghara Mpempe Akwụkwọ Mgbasa Ozi Area9 - Rhapsode - na-eduzi ndị na-amụ ihe site na iji usoro mmụta na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-ewepu nkụda mmụọ na nkụda mmụọ.
Ikpo okwu nwere ike igbutu oge iji zie ihe dị ka 50%, yana ikike nke 100% niile rụzuru.
Dr. Khurram Jamil, Onye isi oche - Strategic Initiatives, Area9 Lyceum, kwukwara, sị, “Honoris bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ izizi mbụ dị n’Africa iwetara ụmụ akwụkwọ na teknụzụ na-agbanwe agbanwe Rhapsode maka agụmakwụkwọ ka elu na kọntinent
Ka anyị na-aga n’ihu inyocha mmetụta ala ala nke ọdụ ụgbọ ala nke anọ na-enwe na mkpa nke ndị ọrụ ga-abịa n’ọdịnihu, anyị nwere obi ụtọ ịnye usoro mgbanwe a, data-akwado, usoro ọzụzụ nke narị afọ nke iri abụọ na otu maka ụmụ akwụkwọ Honoris ma kwado nkwado nke ikike. ihe ọmụma dịkwa mkpa iji nwee ọganihu n'ebe ọrụ teknụzụ nwere ike. ”
Honoris kpebisiri ike imepụta mmetụta mgbanwe na agụmakwụkwọ n'ofe Afrịka site na ịnọ na isi ụzọ mmụta ọhụụ, na-eme ka mmụta na-agbanwe agbanwe, AI, AR na VR, ịme anwansị, yana ụdị agụmakwụkwọ ndị ọzọ dịka nzuzo bootcamps na ndị ọzọ iji kwadebe talent ụwa nke Africa na-asọmpi na ngwa ngwa taa, na-achọ ma na-arịwanye elu digitized ọrụ na ahịa mmalite.